Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya ee Dalka Koonfur Afrika oo Shir Qiimayn ah Isugu Yimid
Maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya ee Dalka Koonfur Afrika oo Shir Qiimayn ah Isugu Yimid
Posted by ONA Admin	/ December 16, 2014
Waxaa shir muhiim ah ku yeeshay magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika maamulka jlaaiydda JOKA. Ajendaha shirka ayaa ka koobnaa umuuro dhawr ah oo ay ugu horaysay la xisaabtanka hogaamada jaaliyadda mudadii 2da bilood ahayd ee ugu danbaysay waxayna hogaamadu si waafi ah u soo gudbiyeen wax qabadkoodii laba bilaha ahaa.
Sidoo kale waxaa la dhagaystay warbixin sanadeedkii jaaliyada ee 2014, waxaana qiimayn lagu sameeyay horumarkii iyo tilaabooyinkii ay jaaliyadu qaaday iyadoo la isla ogolaaday in ay sanadkan jaaliyadu horumar balaadhan oo la taaban karo samaysay. Waxaa sidoo kalle laga wada hadlay mudada maamulka u dhiman hab-shaqeedkiisa siduu noqon lahaa.
Shirka ayaa yimid xili uruka OYSU faraca Koonfur Afrika uu dhaqdhaqaaq xoogan oo abaabul ah kawado xarunta Jaliyada, wuxuuna ururka galay saacadihii ugu danbeeyay shirar lagu tayaynayo xubnaha maamulka OYSU.
Ururka Dhalinyarada ayaa qayb wayn ka ahaa abaabulka shirka, taasoo lagu amaanay. Guud ahaanba shirarkan ayaa guul kusoo dhamaaday.